I-TRF kwi-Press 2020-Umvuzo weSiseko soThando, isini kunye ne-Intanethi
Ikhaya I-TRF kwi-Press 2020
Iintatheli zifumene iSiseko soMvuzo. Basasaza igama malunga nomsebenzi wethu kubandakanya: izifundo zethu malunga nomngcipheko wokuzinkcinkca kwi-porn ixesha elide; ikhwelo lokuba kufundiswe ngesondo okusebenzayo, okujolise kwingqondo kuzo zonke izikolo; Isidingo soqeqesho lwababoneleli ngezeMpilo be-NHS malunga neziyobisi ezingamanyala kunye negalelo lethu uphando kwiziphathamandla zesondo ezibangelwa isondo kunye nokuziphatha okunyanzelekileyo ngokwesini. Eli phepha libhala ukuvela kwethu kumaphephandaba nakwi-Intanethi. Sinethemba lokuthumela amanye amabali amaninzi njengoko i-2020 iqhubeka.
Ukuba ubona ibali eline-TRF esingayibekiyo, nceda usithumelele Phawula ngayo. Ungasebenzisa ifom yoqhakamshelwano emazantsi ephepha.
Fowunela amakhadi okuthenga ngetyala akhululeke kwiindawo ezinamanyala
Ngu-Megha Mohan, Isini kunye nomnxibelelanisi wesazisi kule BBC NewsNgoLwesihlanu we-8 kaMeyi 2020
Iinkampani ezinkulu zamakhadi etyala kufuneka zivimbe iintlawulo kwiindawo ezinamanyala. Olu luluvo lweqela labakhankaseli bamazwe aphesheya kunye namaqela omkhankaso abathi basebenza ukujongana nokuxhatshazwa ngokwesondo.
Ileta ebonwe yi-BBC, esayinwe ngabaphembeleli abangaphezulu kwe-10 kunye namaqela omkhankaso, ithi iisayithi ezibonisa amanyala "zikhuthaza ubundlobongela obuphathelele kwezesondo, umbulo, kunye nobuhlanga" kwaye zihambisa umxholo obonisa ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo kunye nokuthengiswa ngokwesondo.
Esinye isiza esiphambili, i-Pornhub, sithe "le leta yayingesosiphene nje kuphela kodwa yayikhohlisa ngenjongo."
U-Mastercard uxelele i-BBC ukuba baphanda amabango enziwe kule leta kwiindawo zoononografi kwaye "bazokuphelisa unxibelelwano lwabo kwinethiwekhi yethu" ukuba umsebenzi ongekho mthethweni womnini wekhadi uqinisekisiwe.
Iinkampani ezili-10 eziphambili zamakhadi okuthenga ngetyala
Le leta yathunyelwa kwiinkampani ezili-10 ezinkulu zamakhadi etyala, kubandakanya i "Big Three", iVisa, MasterCard kunye neAmerican Express. Abatyikityi abasuka kumazwe aquka i-UK, i-US, i-India, i-Uganda ne-Australia baye bacela ukuba kunqunyanyiswe iintlawulo kwiindawo ezingamanyala.
Abatyikitye le leta babandakanya iqela elingenzi nzuzo iZiko leLizwe kuXhatshazo ngokwesondo (i-NCOSE) e-US, kunye namanye amaqela akhokelwa yinkolo okanye abasetyhini kunye namaqela okukhuthaza amalungelo abantwana.
Le leta ibanga ukuba akunakwenzeka "ukugweba okanye uqinisekise ukuvuma nakweyiphi na ividiyo kwindawo yabo, makungabikho vidiyo yewebhu iphilayo" ethi "ngokwendalo yenza ukuba iwebhusayithi yephonografi ijolise kubathengisi bezesondo, abahlukumezi babantwana, kunye nabanye ababelana ngeevidiyo ezingekho semthethweni".
UHaley McNamara, umlawuli weZiko laMazwe ngaMazwe lase-UK eliSebenzisa ukuSetyenziswa kwaBantu abaSebenzisayo, siye sabona isikhalo esandayo malunga nokwenzakala kwamanyala ekwabelana ngewebhusayithi kwiindlela ezininzi kwiinyanga nje ezidlulileyo. notyikityo lwencwadi.
"Thina kwilizwe lokukhuthaza abantwana kunye noluntu oluchasene nokuxhatshazwa ngokwesondo sifuna amaziko emali ukuba ahlalutye ngokucacileyo indima yabo yokuxhasa i-pornography, kwaye banqumle ubudlelwane nabo," uxelele i-BBC.
Ingxelo malunga nomnqweno weevidiyo zokuphathwa gadalala kwabantwana kwiindawo ezingamanyala yapapashwa ngo-Epreli yi-India Protection Protection Fund (ICPF). Umbutho uthe bekukho ukonyuka okukhulu kwemfuno yokukhangelwa gadalala kwabantwana eIndiya, ngakumbi ukusukela oko icronavirus lockdown.
Ukubeka iliso kwi-Intanethi
I-Pornhub, eyona ndawo isasazwayo yefilimu eshukumayo, ibizwa ngegama. Ngo-2019, babhalisa utyelelo olungaphezulu kweebhiliyoni ezingama-42, olingana nezigidi ezili-115 ngosuku.
I-Pornhub yayiphantsi kovavanyo kunyaka ophelileyo xa omnye wabanikezeli bayo bomxholo- Amantombazana enza i-Porn-aba sisihloko sophando lwe-FBI.
I-FBI yahlawulisa abantu abane abasebenzela inkampani yemveliso eyenza umjelo wokuphembelela abantu basetyhini ukuba benze iifilimu ezingamanyala ezenziwa ngokukhohlisa. I-Pornhub yasusa ijelo le-Girl Do Porn ngokukhawuleza kwakuba kwenziwe izityholo.
Ukuphawula kwi-BBC ngoFebruwari malunga neli tyala, u-Pornhub uthe umgaqo-nkqubo wayo "kukususa umxholo ongagunyaziswanga msinyane nje emva kokuba senziwe, yiyo kanye le nto siyenzileyo kule meko".
Ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo indoda yaseFlorida eneminyaka engama-30 ubudala, uChristopher Johnson, wajongana nezityholo zokuxhaphaza ngokwesini umntu oneminyaka eli-15 ubudala. Iividiyo zolu hlaselo lwaluthunyelwe kwi-Pornhub.
Kwisitatimende esifanayo kwi-BBC ngoFebruwari, i-Pornhub yathi umgaqo-nkqubo wayo kukuba "ususe umxholo ongagunyaziswanga ngokukhawuleza nje emva kokuba senziwe, yintoni kanye esiyenzile kule meko".
I-Internet Watch Foundation, umbutho wase-UK ogxile ekujongeni ukuxhatshazwa ngokwesondo kwi-intanethi - ngakumbi abantwana - uqinisekisile kwi-BBC ukuba bafumene iimeko ezili-118 zokuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo kunye neevidiyo zokudlwengulwa kwabantwana kwi-Pornhub phakathi konyaka ka-2017 no-2019. Umzimba usebenza ngokubambisana ngamapolisa ehlabathi kunye noorhulumente ukuphawula umxholo ongekho mthethweni.
Kwingxelo eya kwi-BBC, isithethi se-Pornhub sathi "bazinikele ngokuzimisela ekupheliseni nasekulweni nayiphi na into engekho mthethweni, kubandakanya izinto ezingavumelaniyo kunye nabangaphantsi kobudala. Naliphi na elinye icebiso alichanekanga ngokwezibakala kwaye ngokwenyani alichanekanga. ”
Inkqubo yethu yokumodareyitha umxholo iphambili kushishino, isebenzisa ubuchwephesha obukhokelayo kunye neendlela zokumodareyitha ezenza inkqubo ebanzi yokufumana kunye nokususa iqonga layo nayiphi na into engekho mthethweni.
U-Pornhub uthe le leta ithunyelwe yimibutho "ethi izame ukujonga indlela abantu abaziphethe ngayo ngokwesondo- ayisiyonyani nje kuphela kodwa ikwangulahlekisa ngabom."
I-American Express ibinomgaqo-nkqubo wehlabathi okhoyo ukusukela ngo-2000. Umgaqo-nkqubo uthi uyakwalela ukuthengiselana komxholo wabantu abadala wedijithali apho umngcipheko uthathwa njengophezulu ngokungaqhelekanga, uthintelwe ngokupheleleyo kwimifanekiso engamanyala ekwi-intanethi. Kudliwanondlebe kunye newebhusayithi yeSmartmoney ngo-2011, isithethi seAmerican Express ngelo xesha sathi oku kungenxa yamanqanaba aphezulu eengxabano, kunye nokhuselo olongezelelekileyo kumlo wokulwa iphonografi yabantwana.
Nangona kunjalo, imibutho ikwathumele iileta kwiAmerican Express, kuba bathi iindlela zokuhlawula zaseMelika ziye zanikwa kwiindawo ezingamanyala- kubandakanya enye egxile kwimixholo yolutsha.
Isithethi seAmerican Express sixelele i-BBC ukuba ngelixa umgaqo-nkqubo wehlabathi usemi, iAmerican Express inomqhubi onenkampani enye evumela ukuhlawulwa kwiiwebhusayithi ezithile zokusasaza amanyala ukuba intlawulo yenziwe ngaphakathi e-US nakwikhadi lokuthenga ngetyala lase-US.
Ezinye iinkampani ezinkulu zamakhadi okuthenga ngetyala, kubandakanya iVisa kunye neMasterCard, zivumela bobabini abanamakhadi okuthenga ngetyala kunye namatyala ukuba bathenge iphonografi kwi-Intanethi.
Kwi-imeyile eya kwi-BBC, isithethi se-Mastercard sithe "ngoku baphanda amabango ekubhekiswe kuwo kule leta.
"Indlela esebenza ngayo inethiwekhi kukuba ibhanki idibanisa umrhwebi kwinethiwekhi yethu ukuze yamkele iintlawulo zamakhadi.
“Ukuba siqinisekisa ukwenziwa kwezinto ngokungekho mthethweni okanye ukwaphulwa kwemithetho yethu (ngabanini bamakhadi), siyakusebenzisana nebhanki yomrhwebi ukuyizisa ekuthobeleni okanye ekupheliseni unxibelelwano lwethu nenethiwekhi.
"Oku kuyahambelana nendlela ebesikade sisebenza ngayo nee-arhente zogcino-mthetho kunye namaqela afana naMaziko kaZwelonke nawamaZwe ngaBantwana aBalahlekileyo nabaXhatshaziweyo."
Ezinye iintshukumo zenziwe ziinkampani zokuhlawula kwi-Intanethi ukuze zikude kude nomzi-mveliso we-pornography.
Ngo-Novemba ngo-2019, i-Paypal, inkampani ehlawula yonke imali kwi-Intanethi, yabhengeza ukuba ayisayi kuphinda ixhase intlawulo kwi-Pornhub njengoko umgaqo-nkqubo wabo uthintela ukuxhasa "izinto ezithile okanye iinkonzo ezijolise kwezesondo".
Kwibhlogi kwindawo yabo, i-Pornhub yathi "bachithakele" sisigqibo kwaye inyathelo liza kushiya amawaka eemodeli ze-Pornhub kunye nabadlali abathembele kubhaliso kwiinkonzo zepremiyamu ngaphandle kwentlawulo.
Umntu owenza umnyhadala wabelana ngesondo kwi-Pornhub, kwaye ucele ukungaziwa, uthe intlawulo yomkhenkce iya kuba nefuthe elibi kumvuzo wakhe.
"Ngokunyanisekileyo, kuya kuba yinto yokuqhuma komzimba," watsho. "Ingayicima yonke ingeniso yam kwaye ndingazi ukuba ndingayifumana njani imali, ngakumbi ngoku xa kutshixwa."
Ukulandela uxinzelelo olonyukayo lokuphendula ngokuvela kwiindawo ezibonisa amanyala, uSenator Ben Sasse waseNebraska wathumela ileta kwiSebe lezoBulungisa laseMelika ngo-Matshi ecela igqwetha eliyiNtloko uWilliam Barr ukuba enze uphando nge-Pornhub ngezityholo zokusasaza nokudlwengula.
Kwinyanga nje enye, abantu basePanada abangama-XNUMX ePalamente babhalela iNkulumbuso uJustin Trudeau becela ukuba kwenziwe uphando kwi-MindGeek, inkampani yabazali ye-Pornhub, enekomkhulu layo eMontreal.
IZiko laMazwe ngaMazwe ngokuThengiswa kwezeSondo, e-UK,
IZiko leLizwe ngokuSetyenziswa ngokuSweleyo, e-US,
Umdibaniso odibeneyo, e-Australia
Inethiwekhi yaseYurophu yabafazi abafudukayo, eBelgium
ILizwi lenziwe inyama iBolivia, Bolivia
Imithombo yeendaba yeMidiya yaBantwana noLutsha, eDenmark
I-Apne Aap, eIndiya
Igqwetha elisindileyo, eIreland
INethiwekhi yase-Afrika yoThintelo kunye nokuKhuselwa kokuphathwa gadalala kwabantwana kunye nokungahoywa, Liberia
Isiseko soMvuzo, eScotland
Inkqubo yaMakhwenkwe yokuNika iingcebiso, eUganda